Kungani thina Mingwang？ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
UKUMAKISWA KOMHLABA WONKEK
Ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, uMingwang usungule inethiwekhi yesevisi yokuthengisa evuthiwe emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele.
Umhlinzeki wekhwalithi ephezulu wezinto zokunisela eChina
• 24/7 professional ukuxhumana.
Sineqembu eliphambili, ithimba locwaningo lwesayensi kanye nabasebenzi bezobuchwepheshe.
• Ukulethwa okusheshayo, Isikhathi sokulethwa esitebeleni.
Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa nayo inikezwe ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi lokuthenga olujabulisa ngokuphelele nathi.
1.Yiziphi Izinsizakalo Ezihlinzekwa nguMingwang?
IMingwang inikezela ngezintambo zokukhiqiza zamapayipi wokunisela wokujikeleza oyindilinga, oyisicaba, omncane nodonga olujiyile kanye nethephu yokunisela yokunisela, amapayipi e-PE ne-PVC. Siphinde sithengise iziphuzo zokunisela eziyindilinga nezicabalele futhi sinikeze ngezinsizakalo ezahlukahlukene kusuka ekuhlelweni okuningiliziwe kwephrojekthi kuya ekuthengeni imikhiqizo emincane yokunisela; UMingwang unakekela ukufakwa kanye nokuqeqeshwa kwabasebenzi ngokusekelwa okuqhubekayo kanye nobuchwepheshe bamuva bokugcina ukuncintisana ezimakethe zanamuhla nezomhlaba wonke. Ungaba ngumkhiqizi ozimele ngokuphelele wepayipi lokunisela lokudonsa, iteyipu yokunisela ngenkasa, ipayipi le-PE nepayipi le-PVC ngeMingwang
Mingwang uneminyaka engaphezu kwengu-35 yokukhiqiza isipiliyoni e drip ngenkasa kanye PE, PVC ipayipi extrusion. Sifake imishini yezinkampani ezaziwayo ezingaphezu kwekhulu futhi sasiza amakhasimende ukusungula amafemu.
Sinikeza ikhwalithi ephezulu, isivinini esikhulu, imishini emangelengele ngokugxila ebulungiseni nasekusebenziseni kalula okufanele abasebenzi abancane nabalula. Imishini yethu iyisondlo esiphansi futhi ihlolwe insimu ukumelana nezimo zezimboni. Uma uthenga kwaMingwang awutholi nje kuphela imishini esezingeni eliphakeme, kepha ukwesekwa kochwepheshe okuqhubekayo okuvela eqenjini lethu okuzinikele ekusizeni uphumelele.